Etats-Unis : Lany teo anivon'ny solotenam-bahoaka fa afaka ahongana i Donald Trump
jeudi, 14 janvier 2021 09:23
Taorian'ny fanaingana ireo mpomba azy hiakatra ny lapan'ny kongresy, mandritra ny fotoam-pivoriana momba ny fanamarinana ny vokam-pifidianana filoham-pirenena, ny filoha am-perinasa ankehitriny Donald Trump, izay nahitana famingavingana ny lapa, ny fahasimbana, ary ny fisian'olona 5 maty vokatry ny sakoroka, dia naroson'ny teo anivon'ny solotenam-bahoaka, Chambre des représentants, ny fahafahana manongana ny Filoha am-perinasa.
Mila ny maro an'isa ny latsabato, ka nahazo isa 232 tamin'ireo mpifidy ny tsao-kevitra fahafahana miroso amin'izany, raha 197 no nitsipaka ny alarobia 13 janoary 2021.
Koa dia lany izany, fa azo atao ny mitsara ny Filoha Donald Trump eo anivon'ny Loholona, izay fotoana ahafahany mitondra ny fanazavany, ny mpisolo vava azy, ary ahafahana mametraka fanontaniana sy fanadiadiana azy.
Ny solotenam-bahoaka moa, dia ny demokraty, miaraka amin'ny filoha lany ankehitry Joe Biden, no maro an'isa ao, fa nisy 10 ireo Repoblikanina iray antoko amin'i Donald Trump no nifidy ny anonganana azy.
Ny antenimieran-doholona kosa, dia ny repoblikanina no maro an'isa any.
Nilaza moa ny filohan'ny Loholona izay Repoblikanina, fa aorian'ny fianianan'ny filoha vaovao Joe Biden ny alarobia 20 janoary izao, vao miroso amin'izay fandinihan'ny Loholona ny fahafana manongana sy mitsara ny raharaha Donald Trump izay.
Nilaza moa ity farany fa tsy nitarika vahoaka andrava na amono olona izy, ary notapahana tsy nomena fahafahana miteny izy, ka tsy hitan'ny olona mpomba azy, ny fanaingany ho tony, sy tsy hanao herisetra.
Efa in-telo amin'izao, hatramin'ny nitondrany nanomboka ny taona 2017 no nisy izao fikasana anongana azy izao, teo ny raharaha famadihana tanindrazana tamin'ny ahiahy fa niray petsapetsa tamin'ny Rosianina ny filoha Donald Trump tamin'ny fifidianana filoham-pirenena, nahiana nandray famatsiam-bola avy any mihitsy. Fa maty ankaranany tsy tafita moa ity fikasana ity.
Ny faharoa dia ny raharaha Okraina, izay nahiana ny Filoha amerikanina nanao tsindry tamin'ny filoha Okrenianina ny hampanao fanadiadiana manokana momba an'i Joe Biden izay vao nirotsaka ho kandida Filoham-pirenena. Tafita teo anatrehan'ny Solotenam-bahoaka ny raharaha, fa notsipahan'ny Loholona anefa izany fiampangana azy izay ka tsy nahomby ny fanonganana.
Indroa amin'izao izany i Donald Trump no hiakatra ny fitsarana eo anivon'ny Loholona, ny rahahara Okrenianina, ary ity raharaha fiakaran-dapa kongresy ity.
Natolotra io maraina io ny Antenimieran-doholona ny taratasy fiampangana ny filoha ankehitriny Donald Trump. "Fanaingana fikomiana" (incitation à l'issurection) no hiampagana ity filohan'ny Etats-Unis ity, herinandro alohan'ny fahataperan'ny fotoam-piasany.